05/01/2018 - Page 3 sur 4 -
Sambava : Zaza tsy ampy taona tra-tehaka nangalatra
Nisehoana trangana halatra vola an-tapitrisany indray tany amin’ny fokontany Ampahana Antalaha faritra Sambava. Ny andron’ny zoma lasa teo no nisehoan’izany. Araka ny fikarohana nataon’ny mpitandro filaminana nanao ny famotorana ny raharaha no nahazoam-baovao fa ankizilahy …Tohiny
Anjara voan’ny « Hémangiome » : Raisin’ny Filoha mivady an-tanana ny fitsaboana rehetra
I Anjara dia zazamenavava vao efa-bolana monja, zanaka mpamboly avy any Farafangana. Mararin’ny “hémangiome faciale droite” miaraka amin’ny “nécrose” n’ny sofina izy, izay tonga hatrany amin’ny masony. Io aretina io dia tsy afaka hotsaboina any …Tohiny
Fotoana iray manamarika ny taona vaovao ny fifampiarahabana izay tanterahina eny amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha, ary fotoana ihany koa hiarahaban’ny filoham-pirenena malagasy ny vahoaka rehetra manerana an’i Madagasikara. Nasaina eny avokoa noho izany ireo tompon’adraikitra …Tohiny
Tsy honohono. Nanomboka ny voalohandohan’ny volana desambra teo ny asa fanamboarana sy fananganana kianja mitafo maoderina ao Antsirabe, eny amin’ny Vatofotsy. Fotodrafitrasa maoderina tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izany. Araka ny fampitam-baovao, ny kaominina Ambonivohitr’Antsirabe …Tohiny